Amabhodlela Okuklama Ngokwezifiso
Amabhodlela Oda Amancane
Indlela yokuhlukanisa ingilazi enomthofu nengilazi engenamthofu?
Ukusetshenziswa isikhathi eside kwezingilazi ezinomthofu kuzokwandisa ukunqwabelana komthofu egazini. Ngemva kokufinyelela izinga elithile, kuzobangela inkumbulo nobuhlakani bomuntu kwehle, ukuphazamiseka kwengqondo, amaphupho amabi, ukuqwasha nezinye izinkinga. Ubuthi bomthofu buyingozi kakhulu ezinganeni futhi...
Yiziphi izinhlobo zezibuko ze-champagne ezikhona?
Kusukela ezikhathini zasendulo, kubonakala kunobuhlobo obungokwemvelo bokubhanqa phakathi kwewayini nesitsha, kodwa abangane abacophelelayo kumelwe bathole ukuthi indebe esetshenziselwa iwayini elicwebezelayo ihluke kakhulu. Yiziphi izinkomishi ze-champagne ezivamile futhi yiziphi izinhlobo zokusebenzisa kwazo? 1.Ingilazi ye-champagne ye-Saucer Eqinisweni, kuze kube ngu-1970 ...
Izingilazi eziyi-10 ezijwayelekile ze-cocktail
I-Cocktail iyizwe elimibalabala. Igcwele ubuciko futhi iyintandokazi yabantu abaningi. Kunezinhlobo ezingenakubalwa zama-cocktails emhlabeni, futhi izinkomishi ezisetshenziselwa ukubamba ama-cocktails nazo zinezimpawu zazo. Uma ungena endaweni yokucima ukoma, ungabona nakanjani zonke izinhlobo zezingilazi zewayini ku-counte...
Inqubo yokukhiqiza ibhodlela lengilazi yemephu
1.Imidwebo yokuklama-design 2.Ukwenza isikhunta-usebenzisa insimbi ye-alloy nge-chrome-plated molds, ngokusho komdwebo oqinisekisiwe ukwenza isikhunta 3.Lungisa izinto zokwakha Ibhodlela lenziwe ngengilazi ephezulu ye-borosilicate, Ikhethe ubukhulu obufanele bengilazi ephezulu ye-borosilicate ithubhu nombala okufanele ulungiswe. 4.fabri...
IZINHLOBO ZEGALASI YEWINI
"Iwayini elihle elinengilazi enhle" ingabe ufuna ukwazi umehluko phakathi kwezitayela ezihlukahlukene zezibuko zewayini esitolo? Omunye angase athi “anginandaba, ngifuna inkomishi iphuze amanzi” Kulungile! Kodwa usafuna ukutshela wonke umuntu ukuthi kusabaluleke kakhulu ukukhetha ...
Inqubo yokudweba igolide yengilazi
Uyabona ukuthi izingilazi eziningi zinerimu yegolide noma amaphethini kuzo, futhi abantu abaningi bayazibuza ukuthi lenziwe kanjani i-rim yegolide ezacile engilazini. Ngakho, ngokulandelayo, ngizokunikeza incazelo emfushane yokuthi igolide lalipendwe kanjani engilazini. Eqinisweni, kunezinhlobo ezimbili zomdwebo wegolide: i-manual kanye ne-mec...
Mayelana nebhodlela lengilazi yengilazi ye-K9 emhlophe kakhulu
Kusukela kwazalwa imikhiqizo yengilazi, umhlaba ubulokhu uphishekela umlingo ocwebezelayo ocwebezela ngekristalu, uphishekela njalo impumelelo kwezesayensi nobuchwepheshe kanye nemikhawulo yokucubungula impahla eluhlaza, futhi uzama ukwethula isipiliyoni sekhwalithi ephezulu ezithombeni eziningi ezingelona iqiniso. .
Inqubo yokukhipha ucingo
Inqubo Yokukhipha I-1.Unboxing 1) Khetha imikhiqizo enesici bese ubuyela emnyangweni wokukhiqiza,Imikhiqizo efanelekayo ifakwa kuphalethi bese ithunyelwa emnyangweni we-decal. 2) Uma kukhona isitika engilazini, sisuse bese uhlanza i-glue yesitika. 3) Imikhiqizo engafanelekile ...
Yiziphi izindlela zokukhiqiza ze-glassware?
1. Ingilazi eyakhiwe ngokuvuthela, kanye ne-glassware ephephethayo ingahlukaniswa ngezindlela ezimbili: ukuvunguza ngomshini kanye nokuvunguza ngesandla. Okubizwa ngokuthi i-blow molding ukusebenzisa umoya ocindezelweyo noma ukuvunguza komlomo okwenziwa ngesandla ukuze wenze uketshezi lwengilazi lube uhlobo oluthile lomkhiqizo esikhunjeni. Ukufutha mathupha kungab...
Inqubo yokukhiqiza ingilazi efutha umlomo
Izingilazi ezenziwe ngomshini zilula ukukhiqiza, zonga isikhathi futhi zisebenza kahle, ngakho ziya ngokuya zijwayeleka. Kodwa kwezinye izimo ezimise okukhethekile futhi okunzima ukuzikhipha, ezinye izinkomishi ezicwebezelayo ezinemibala, Ukufutha umlomo akubuyiseleki. funda kabanzi mayelana nokukhiqiza...
Yiziphi izinhlobo zezinto ezikhona zengilazi
1. Ingilazi ye-soda lime Izibuko zansuku zonke, izitsha, njll zonke zenziwe ngale nto, ebonakala ngokuhluka okuncane kokushisa okungazelelwe. Isibonelo, uma amanzi abilayo ethelwa engilazini esanda kukhishwa endaweni yesiqandisi, kungenzeka ukuthi aqhume. Ngaphezu kwalokho, akunconyiwe ...
Ingilazi ye-whisky yakudala, wazi kangakanani?
1. Ukuthinta okokugcina edwaleni Kusuka ohlotsheni lwaseCanada, idwala lentaba-mlilo elingaphansi kwengilazi ye-whisky yentabamlilo liyabunjwa. Ibhola leqhwa lifriziwe ngesikhunta esifakiwe. Lapho uphuza i-whisky, engeza i-ice ball, unyakazise ingilazi ngobumnene, ibhola leqhwa ligoqeka ngokulinganayo, lipholile ...
Sicela uthinte ukuze u-ode!
Imibala ibhodlela ingilazi